Enda kumberi uye uve nemuchina wekukwasva kumba | Bezzia
Tony Torres | | Exercise
Kana iwe uchitsvaga iko kurovedzwa kuti ikubatsire iwe kutaura tsandanyama dzako, kurasikirwa akawanda macalorie uchiita mitambo uye wedzera simba rako, muchina wekukwasva ndiyo sarudzo yakanakisa. Iko kushomeka-kwakasimba kurovedza muviri, kwakanakira kune ese marudzi e physiognomies uye kuti iwe unogona kudzora zvinoenderana nekugona kwako. Munzvimbo dzemitambo kana magyms eguta chero ripi zvaro, unogona kuwana michina iyi yekuita cardio Workout.
Asi unogona zvakare kuva nemuchina wekukwasva pamba, chimwe chinhu icho vanhu vazhinji vanofungisisa kunyaradzwa kwekukwanisa kuita mitambo kumba. Unogona kuve nekusahadzika kwako maererano nerudzi urwu rwemuchina, sezvo chiri chakakura uye chakaoma kuisa chinhu. Asi kana iwe uchida kupinda muchimiro, muchina wekukwasva unozadzisa iri basa zvachose uye muchinhu chimwe chete.
Ndokunge, iwe unogona kuve nezvinhu zvakawanda pamba kuti uite maekisesaizi. Zvakananga zvinhu zvaunogona kudzidzisa imwe nharaunda. Nekudaro, muchina wekukwasva wakakwana kwazvo, zvekuti unozozvichengetera wega kuda kwekuve nezvimwe zvinhu kuti ukwanise kuita kuzara kwese.
1 Nzira yekusarudza yakanakisa sarudzo yekuve nayo pamba
2 Zvakanakira kuve nemuchina wekukwasva pamba
Nzira yekusarudza yakanakisa sarudzo yekuve nayo pamba
Mumusika unogona kuwana michina isingaverengeke yekukwasva pamba, yemhando dzakasiyana, maficha, hunhu uyezve, zvemitengo yakasiyana. Kunyangwe nyaya yezvehupfumi ichikosha, handicho chega chinhu chaunofanira kufunga nezvacho paunenge uchisarudzira akakodzera chikepe muchina chako. Izvi ndizvo zvimwe tsananguro dzaunofanirwa kuongorora kuti uve nesarudzo yakanyanya kunaka.
Kuchengetedza: Kubatsira kukuru nhasi maererano nekuchengetedza ndeyekuti makambani anoziva kuti ari kudzidzisa zvakanyanya kumba. Izvi zvinoreva kuti mabhenefiti epamba ari kuvandudzika, senge kugona kuita chengeta yako yekukwasva muchina kumba nyore. Sarudzo yakanakisa kana usina nzvimbo yakawanda kusarudza muchina wekupeta, une mavhiri kana usina huremu hwakawandisa.
Rudzi rwekurwisa: Mumusika unogona kuwana michina yekukwasva ine mhando dzakasiyana dzekushorwa, mweya, mvura, magnetic kana hydraulic. Kunyangwe zvingaite senge isingakoshe ruzivo, iyo mhando yekupokana inogadzira manzwiro akasiyana kana uchiita iko kurovedza. Edza kuyedza sarudzo dzakasiyana uri munhu kuitira kuti iwe ugowana iyo inokodzera zvakanyanya zvaunoda.
Ruzivo: Rudzi rwekupikisa zvakare runonongedza ruzha rwunoitwa nemuchina. Kune rimwe divi, hapana zvachose chinyararire sarudzo, asi iwe unogona kutsvaga iyo inokodzera zvakanyanya kuramba kwako kuruzha. Avo vane mweya unopikisa kazhinji vanowedzera zvinonzwika, chengeta mupfungwa kana uchiita yako sarudzo.
Zvakanakira kuve nemuchina wekukwasva pamba
Nguva zhinji mitambo inomiswa nekuda kwehusimbe hwekuenda kujimini. Saka kuve nenzvimbo diki yemitambo pamba inova sarudzo yakanyanya kunaka kune vane huremu. Kuva nemuchina wekukwasva pamba ndiyo nzira yakanakisa yekurovedza muviri mazuva ese, nekuti Iko kusununguka, kumagumo iwe haufanire kufamba uye iwe unogona kurovedza muviri chero nguva zvezuva iri, hapana zvikonzero.
Kune rimwe divi, muchina wekukwasva une zvese mabhenefiti aya padanho remitambo:
Iwe unopisa akawanda macalorie mune imwechete kurovedza muviri. Ndokunge, kana iwe uchida kudzikira uremu, uku kudzidziswa kuchakubatsira iwe kuzviita nenzira iri nyore. Iwe uchafanirwa kuita nhamburiko, asi iwe uchazviwana kuburikidza nekuita kamwechete kurovedza pasina kuisimbisa pamwe nekumwe kurovedzwa. Izvo zvakare zvinoderedza iyo yekurovedza nguva yekuita zuva rega rega.
Unodzidzisa muviri wese panguva imwe chete, sezvo uchiita kumberi uye kumashure nekufamba nemuviri wako wese.
Inobatsira kusunungura kushushikana kwese, yakanakira kubvisa kusagadzikana kwezuva nezuva uye kuwana kurara kwakadzikama.
Iko kushomeka kwakasimba, saka kukuvara kwemajoini kwakaderedzwa.
Sezvauri kuona, kuve nemuchina wekukwasva pamba inzira yakanaka kune ese marudzi evanhu. Uye chimwe chinhu chakakosha ndechekuti kune mitengo yemahomwe ese. Zvinoreva kuti chinhu chinowanikwa nevanhu vazhinji.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Utano » Exercise » Enda kumberi uye uve nemuchina wekukwasva pamba
Matipi uye madiki ekugeza machira kumba